ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအချက်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်. လုပ်တယ်, သို့သော်, အချို့သောကန့်သတ်နှင့်အတူလာ. အထူးသဖြင့်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်စီစဉ်ထားပါက. ကလေးတစ်ယောက်အားသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်ကန့်သတ်ထားသည်, အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားတဲ့အခါ. လူတစ် ဦး သည်ပျံသန်း။ မရနိုင်ပါ၊ အချို့လများအတွင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အခြားခရီးသွားခြင်းပုံစံများလည်းရှိသည်, သို့မဟုတ်သင်ရှုပ်ထွေးမှုများကြုံနေရလျှင်. ဤအရာအားလုံးကိုသင်၏ကိုယ်ဝန်ခရီးသွားအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းပါ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားသောအခါသင်သွားလိုသောနေရာသို့ရောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် မီးရထားကနေတဆင့်. ရထားကုမ္ပဏီများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုမကြာခဏကျွေးမွေးသည်, သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားသည့်အခါလူကြိုက်အများဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် raveling. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
သင်သည်သင်၏ကလေးငယ်နှင့်ပင်သင်၏ခရီးကိုမစတင်မှီ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပါ, ဒီအလိုတော် သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဌာန်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ ခရီးသွား၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုတက်သဲရန်. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းကသင့်ထံမှများစွာယူဆောင်နိုင်ပါသည်. ဆန့်လေ့ကျင့်ပါ, နှင့်သင်၏အဓိကနှင့်ခြေထောက်ခိုင်မာ. ခရီးသွားအခန်းများတွင်အိပ် သငျသညျရန်အသုံးပြုကြသည်ထက်မကြာခဏပိုပြီးကျဉ်းကျုတ်ဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်အပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်သည်.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်း 1: သင့်ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ
သငျသညျကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာစတင်မီ, သင်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသင်၏မှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးပါ. သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားနေကြောင်းရှင်းပြရန်သေချာပါစေ ရထားနဲ့ လေထဲမှာမနေဘူး, ကြောင်းအဖြစ်အများဆုံးဖွယ်ရှိရလဒ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရပါလိမ့်မယ်. အန္တရာယ်မြင့်မားသောကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တတိယသုံးလပတ်နောက်ကျသောသူများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာခွင့်ကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုတင်ရှင်းလင်းခံရဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. သင် All- ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်ပြီးတာနဲ့, စာအုပ်ယူပါ အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်.
T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် raveling အဖျား 2: ဂရုတစိုက်စီစဉ်ပါ
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများနှင့်ပါတီပွဲများကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များသည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကာလထဲသို့အမြဲမကျရောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်, အထူးသဖြင့်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်စီစဉ်နေလျှင်. ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်, သို့သော်, သင်၏ခရီးသည်သင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏အဆင်ပြေဆုံးနေရာနှင့်တိုက်ဆိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးစားပါ. ပထမသုံးလပတ်မကြာခဏဖြစ်သည် ပျို့ချင်နှင့်အတူကပ်, အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊, အရာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားဘို့သတင်းဆိုးဖြစ်ပါတယ်. တတိယသုံးလပတ်မှာဝေလငါးနှင့်တူသည်ဟုသင်ခံစားရသောအခါဖြစ်သည်, နှင့်မည်သည့်အချိန်ကာလအဘို့အမတ်တပ်ရပ်သင်၏ခြေကိုလဲကျလိုသောစေသည်. ရောင်ရမ်းခြေဆစ်ထည့်ပါ, အိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်း, နှင့်အစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာကလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုသို့သံသရာနှင့်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာလျှင်သင်အလွန်မသက်မသာခရီးစဉ်ရှိနိုင်ပါသည်. ဒုတိယသုံးလပတ်သည်များသောအားဖြင့်သင်၏ခရီးကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်. သင်သေးလွန်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ပျို့စဲသွားပြီ. သင်တက်ချင်သည့်အချိန်တစ်ခုလုံးကိုမကုန်ဆုံးပါကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, သို့မဟုတ်အိပ်ပါ!
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်း 3: သင်၏ခေါင်းအုံးယူလာပါ
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းခရီးသွားနေစဉ်အဆင်ပြေစွာရခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ. အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နည်းနည်းနောက်ကျလျှင်ဖြစ်သည်. သင်၏ခရီးအတွက်သင်၏အကြိုက်ဆုံးခေါင်းအုံးများကိုထုပ်ပိုးရန်သေချာပါသည်. သင်၏ခေါင်းအုံးများထားရှိခြင်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်နှစ်သိမ့်မှုပိုမိုရရှိစေရုံသာမက, ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသွားတာကိုကူညီဖို့သင့်ကိုရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုကိုလည်းပေးလိမ့်မယ်. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းကသင့်နောက်ကျောကိုဖြစ်စေနိုင်သည်, လည်ပင်း, သင်တို့ရှိသမျှသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုနာကျင်. ကြည့်ရအောင်, တော်တော်များများဘာမှမကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါ တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူသောအရာတို့ကိုလုပ်ပါ သငျသညျကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာအခါ.
T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် raveling အဖျား 4: သင်၏အချိန်ဇယားကိုသိမ်းထားပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းသည်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောနှောင့်နှေးမှုများနှင့်မကြာခဏလာတတ်သည်. ခရီးစဉ်၏နံနက်တွင်သင်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ, သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားသောအခါသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်မည်ဆိုလျှင်. အရာအားလုံးပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်, တ ဦး တည်းမကြာခဏနှောင်းပိုင်းတွင် run နိုင်ပါတယ်. သင်၏ရထားခရီးမတိုင်မီအချိန်ဇယားဆွဲပါ, နှင့်တတ်နိုင်သမျှအပိုအချိန်အများကြီးထည့်သွင်းဖို့သေချာပါစေ. စောစီးစွာအလုံအလောက်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည် ထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာအဖြစ်နှောင့်နှေး သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်အလျင်စလိုပြုရန်မလိုပါ. သေချာတာပေါ့, သင်၏ရထားကိုစောင့်နေစဉ်ထိုင်ခြင်းသည်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အပြေးအလွှားထက်အပြတ်အသတ်သာ။ ကောင်း၏, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်, အဲဒါကိုဖမ်းရန်.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်း 5: ဝယ်ယူထားသောအစားအစာအပေါ်မှီခိုမထားပါနဲ့
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အရာအားလုံးသည်သင်၏အစာအိမ်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်မစားရသင့်သောအရာတို့ကိုသင်၏လက်မောင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးစာရင်းရှိကွောငျးဖျောပွမထားရန်. သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာများကိုယူဆောင်လာခြင်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်ထိုပြissuesနာအများစုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာထုပ်ပိုးတဲ့အခါ, သင်ကထဲမှာအတိအကျဘာကိုငါသိ၏, နှင့်မျှော်လင့်ထားအတိအကျဘာ. ၎င်းကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်၎င်းကိုအအေးသို့မဟုတ်ပူနွေးစေရန်အေးသောသေတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားသီးခြားထုပ်ပိုးထားသောထုပ်ပိုးများထဲတွင်ထည့်ရန်သေချာစေပါ.
T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် raveling အဖျား 6: Triple သင်၏ဆေးဝါးများကိုစစ်ဆေးပါ
အရေးကြီးတဲ့ဆေးကိုသင်နောက်မှာထားခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီခံစားချက်ကငါတို့တစ်ယောက်မှမခံစားချင်တဲ့အရာပဲ, အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားတဲ့အခါ. သင်မျှော်လင့်နေတဲ့အခါ, သငျသညျနေ့စဉ်အသက်တာမှကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးများအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းခရီးသွားရန်အတွက်ထုပ်ပိုးသည့်အခါ၎င်းတို့သည်သင့်စိတ်ထဲတွင်ချက်ချင်းပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ. သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်ဆေးအလုံအလောက်ရှိကြောင်း၊ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုလည်းသင့်အတွက်လည်းစစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးမှုကိုသုံးကြိမ်စစ်ဆေးရုံသာမက၊.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာ အဖျား 7: သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုမရုပ်ပါနဲ့!
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားသောအခါ၎င်းကိုမကြာခဏသတိမထားမိတတ်ပါ. ဒါကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုငါတို့ခရီးဆောင်အိတ်ကပ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အိတ်တစ်လုံးကိုသယ်ပြီးသွားပြီးလမ်းထွက်ဖို့ပဲ. ခရီးဆောင်အိတ်ကလေးတယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၎င်းကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်! သင်တတ်နိုင်လျှင်လက်ကိုပေးဖို့အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုခေါ်ပါ, မဟုတ်ရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာသင့်ကိုကူညီမယ့်အစောင့်တစ်ယောက်ကိုအလံချပါ.
T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် raveling အဖျား 8: တစ်ယောက်တည်းခရီးမသွားပါနှင့်
သင်ကိုယ်တိုင်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်နေလျှင်ပင်, ၎င်းကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်နေရာတည်းသို့သွားရန်လိုအပ်သည့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာ တယောက်တည်း သင့်ကိုကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသထားတယ်. တစ်ခုခုမှားသွားရင်သင်ဘယ်တော့မှမသိဘူး, ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုကူညီဖို့ခင်ဗျားနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာတစ်ခုလိုတယ်. သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ, သင်နှင့်အတူခရီးသွားရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြားသူအနည်းဆုံးတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားပါ.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားလာ အဖျား 9: တေးဂီတယူလာပါ
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းခရီးသွားနေစဉ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရခြင်း၏အဓိကအချက်မှာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်. စိတ်ဖိစီးမှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မလိုလားအပ်သောကျန်းမာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. သင်၏ရထားပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူတေးဂီတအချို့ယူဆောင်လာရန်သေချာပါစေ. သင်၏နားကြပ်ထဲ၌ထည့်ပါ, ထိုင်ခုံသို့ရောက်သောအခါအနားယူပြီးအနားယူပါ. အသက်ရှူဖို့သတိရပါ.
အဖျား 10: ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရန်သင်၏လက်မှတ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်သာစာရင်းသွင်းထားပါ, ဒါပေမယ့်သင်ဟာ Save A Train နဲ့အတူဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်လည်းရပါတယ်. အကောင်းဆုံးလက်မှတ်များရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ငြိမ်သက်မှုသေချာစေရန်, တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးမှာလုပ်ပါ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားရာတွင်အတွေ့အကြုံကောင်းရှိရန်မှန်ကန်သောရထားလက်မှတ်ရရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာအံ့သြစရာကောင်းပြီးတစ်ခါတစ်လေကြောက်စရာအတွေ့အကြုံပါ. တွင် တစ်ဦးကရထား Save သင်၏ခရီးကိုပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်, ရှေ့ဆက်စီစဉ်, အလားအလာရှိသောထောင်ချောက်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ. T ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်လှမ်း ရထားအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကို, သငျသညျကလေးမျှော်လင့်နေသောကြောင့်နှင့်မပြောင်းသင့်ပါတယ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အချက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-pregnant%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel ကိုယ်ဝန် ရထားခရီးသွား စည်သူလွင် Pရာဝတီ traveltips